မှန်ကန်သောဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ကိုရှာဖွေရန်အဆင့်သုံးဆင့်သာ - Zhongshan Gastek Home Appliance Company Limited
ဆောင်း ဦး နှင့်ဆောင်းရာသီရောက်သောအခါအပူချိန်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးအေးသောရာသီဥတုကြောင့်နွေးထွေးမှုကို ပို၍ တောင့်တစေသည်။ ဒီတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောရာသီဥတုမှာရေချိုးခန်းထဲမှာရေချိုးဖို့ပူနွေးနိုင်တယ်၊ ဒါကပျော်စရာကောင်းတယ်၊ တစ်နေ့ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့လူတွေကိုချရလွယ်တယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာရေအပူပေးစက်စျေးကွက်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး, အရေအပူပေးစက် product of different type, parameter specification makesaperson dazzling. Accordingly how to chooseasuitable ရေအပူပေးစက်, just be to let the body get loosen, the key that experiences the happiness of bath.
Unlike an electric ရေအပူပေးစက်, which can visually see liters,agas ရေအပူပေးစက်'s "liter" refers to the amount of water it can heat per minute. For example,agas ရေအပူပေးစက် rated at 16 liters means that it can provide 16 liters of hot water in one minute.
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ရေချိုးခန်းနှစ်ခန်းပါသည့်မီးဖိုချောင်ဖြစ်ပါက 12L မှ 16L ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ရေချိုးခန်းတစ်လုံးပါတဲ့မီးဖိုချောင်ဖြစ်ပါက 8L-12L ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ 12L ကိုရွေးတာကပိုကောင်းတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ နှစ်ထပ်အဆောက်အအုံသို့မဟုတ်ဗီလာဖြစ်ပါကအိမ်သာပိုများနိုင်သည်ဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်ခြေသည် ၃ မှ ၄ အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အထက်ပါ 16L ကိုအလွန်အကျွံရွေးချယ်ပါ။